Egwuregwu Ụmụaka - Aghụghọ Echiche
Egwuregwu Ụmụ agbọghọ
sonitattoo March 16, 2017
1. Ụdị Epeepe na-ekpuchi otu nwa agbọghọ na-eme ka ọ dị egwu
Ụmụ nwanyị dị ka Ụdị Ọkpụkpụ n'olu. Ihe a na-eme ka ha dị ọkụ ma na-adọrọ mmasị
2. Ọkpụkpụ Scorpion na azụ nke nwanyị na-eme ya ka ọ mara mma
Ụdị Akpịrị Ọkpụkpụ na-amasị ụmụ nwanyị na ejiji ink ojii. Nke a na-eme ka ha mara mma n'anya ọha na eze
3. Ụdị Ọkpụkpụ na-eme ka ụmụ nwanyị mara mma
Ndị inyom hụrụ Tattoo Scorpion na igbe dị n'elu; egbu egbu egbu egbu a na-eme ka ha dị egwu
4. Ụdị Ọkpụkpụ Maka Ụmụ nwanyị nwere ejiji ink nke odo odo na-enye ha ọdịdị mara mma ma mara mma
Ụmụ nwanyị Brown hụrụ Tattoo Scorpion na-eji ejiji ink odo odo; nke a egbu egbu na-emetụta ahụ mmadụ iji nye ọdịdị mara mma ma dị mma
5. Ụdị Ọkpụkpụ azụ n'azụ azụ na-eme ka ụmụ nwanyị mara mma
Ndị inyom hụrụ Tattoo Scorpion azụ n'azụ ha; egbu egbu egbu egbu a na-eme ka ha dị egwu
6. Ọkpụkpụ Scorpion na azụ mere nwa agbọghọ mara mma ma mara mma
Ụmụ agbọghọ na-achọ Tattoo Scorpion na azụ ha. Nke a na-eme ka ha mara mma ma mara mma
7. Ụdị Ọkpụkpụ Ụdị maka ubu na-enye anya nkedo na ụmụ agbọghọ
Ụmụ agbọghọ, na-eji uwe na-acha aka na-akacha aka ga-aga maka Ụdị Ọkpụkpụ n'ubu ha ka ha wepụta ihe ndị ha dọtara n'agha gaa n'ihu ọha
8. Ụdị Ọkpụkpụ Ọkpụkpụ maka apata apata ụkwụ na-eweta anya nwanyi ha.
Ụmụ agbọghọ dị ka Ụdị Ọkpụkpụ Ụdị dị n'apata ụkwụ ha. Ụdị egbu egbu a mara mma ma mee ka àgwà ụmụ nwanyị dịkwuo mma.
9. Ọkpụkpụ Scorpion n'azụ n'olu na-eweta anya nwanyi
Ụmụ agbọghọ dịka Kpochapụ Ụdị Ọkpụkpụ dị n'azụ n'olu. Ejiji egbu egbu a mara mma.
10. Ụdị Ọkpụkpụ Akpụkpọ anụ na mkpịsị nkịkị nwa ojii n'akụkụ ha n'afọ ga-eme ka ụmụ agbọghọ ahụ nụ
Ụmụ nwanyị ndị na-egbuke egbuke ga-aga na nke a na-acha anụnụ anụnụ nke Tattoo Tattoo n'akụkụ ha n'afọ iji mee ka ha ghọtakwuo ma maa mma
11. Ụmụ agbọghọ na-eme Tattoo Tattoo Tattoo na apata ụkwụ ka ha mee ya
Ụmụ agbọghọ na-eme ka Ọkpụkpụ Scorpion na apata ụkwụ gosi ụkwụ ha ma mee ka ọ bụrụ ebe na-adọrọ mmasị
12. Ụdị akpọrọ akpụkpọ anụ nke onk nke ink na-acha n'akụkụ ha ga-eme ka ụmụ agbọghọ ahụ nụ
Ụmụ nwanyị na-egbukepụ egbuke egbuke na oke ojii ga-aga nke a na-emepụta Ụdị Ọkpụkpụ n'akụkụ ha n'afọ iji mee ka ha dịkwuo mma ma maa mma
Tags:akpị akpị egbugbu maka ụmụ agbọghọ zodiac akara akara
Ntuba ntughariudara okooko osisizodiac akara akaraegbu egbu diamondEgwu ugoegbu egbu mmiriakpị akpịegbu egbu maka ụmụ nwokeazụ azụna-egbu egbuegbu egbu hennaegbu egburip tattoosọdụm ọdụmegbu egbu okpun'olu oluọnwa tattoosmehndi imewendị mmụọ oziỤdị ekpomkpaokpueze okpuezeima ima mmaegbu egbu ebighi ebidi na nwunyeaka akaaka mma akaụkwụ akakoi ika tattooụmụnne mgbuarịlịka arịlịkaAnkle Tattoosechiche egbugbuna-adọ aka mmaGeometric Tattoosakwara obiegwu egwungwusi pusiUche obimma tattoosagbụrụ eboegbu egbu osisi lotusenyí egbu egbuegbu egbu egbuenyi kacha mma enyiegbugbu egbugbuakara ntụpọndị na-egbuke egbukeaka akannụnụegbugbu maka ụmụ agbọghọ